Ike mbanye | December 2019
Ụzọ iji jikọọ diski ike abụọ na kọmputa
Oge eruola mgbe otu ike mbanye na kọmputa adịghị ezu. Ndị ọrụ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-ekpebi ijikọta HDD abụọ na PC ha, ma ọ bụghị onye ọ bụla maara otú e si eme ya n'ụzọ ziri ezi iji zere njehie. N'ezie, usoro maka ịgbakwunye disk abụọ dị mfe ma ọ dịghị achọ nkà pụrụ iche.
Otu esi arụkwa diski ike
Ndozi diski ike bụ usoro nke ụfọdụ na-enye ohere ka ụgbọala ahụ laghachi na ike ọrụ ya. N'ihi ọdịdị nke ngwaọrụ a, nnukwu mmebi agaghị enwe ike idozi onwe ya, mana obere nsogbu nwere ike ịmepụta n'enweghị onye ọkachamara. Iwere aka gị weghachite diski ike Ị nwere ike ịlaghachi HDD na ọrụ ọrụ ọbụna n'ọnọdụ ndị a ma ọ bụrụ na anaghị ahụ ya na BIOS.
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere diskigmentation diski ike
Disk Defragmenter bụ usoro maka ijikọ faịlụ dị iche iche, nke a na-ejikarị ebuli Windows. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu ọ bụla banyere osooso nke kọmputa ahụ, ị ​​nwere ike ịchọta ndụmọdụ gbasara imebi. Ma ọ bụghị ndị ọrụ niile ghọtara ihe nkata a na-eme bụ, ma ị maghị ebe ọ dị mkpa iji mee ya, na nke ọ na - adịghị; Kedu ngwanrọ m ga-eji mee ihe maka nke a? Ọ bụ ezigbo ọrụ ahụ, maọbụ ọ ka mma iji wụnye usoro ihe omume ndị ọzọ?
Ụzọ iji kpochapụ diski diski ike
A na-ekegharị ọtụtụ draịva siri ike n'ime akụkụ abụọ ma ọ bụ karịa. A na-ekewa ha ka ha bụrụ ndị dị mkpa na ndị a haziri maka nhazi ụdị data echekwara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka otu n'ime ọkpụkpụ ndị dị ugbu a kwụsịrị, mgbe ahụ ọ nwere ike wepụ ya, ma enweghi ike ịdọrọ ohere ọzọ na mpịakọta ọzọ. Tụkwasị na nke a, ọrụ a na-enye gị ohere imebi data niile echekwara na nkebi.
Diski siri ike bụ akụkụ dị mkpa nke kọmputa ọ bụla. N'otu oge ahụ, ọ na-enwe mmetụta dị nro ma bụrụ onye nwere ike ịdaba na nsogbu dị iche iche. Ya mere, ndị dị njọ n'elu nwere ike iduga arụ ọrụ zuru oke na enweghị ike iji PC. Ọ na-adị mfe mgbe niile iji gbochie nsogbu ọ bụla karịa iji merie nsogbu ya.
Anyị jikọtara draịvụ ike na TV
Otutu ugbua TV di iche iche bu ndi nwere eriri USB na ndi ozo ndi ozo maka ijiko draịva siri ike, ihe ngosi Flash, ihe ntanye egwuregwu, na ngwaọrụ ndi ozo. N'ihi nke a, ihuenyo ahụ abughi nani ụzọ na-ekiri akụkọ telivishọn nke mgbede, mana ezigbo ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Otu esi jikọọ diski ike na TV A diski ike nwere ike iji chekwaa ọdịnaya media na ozi ndị ọzọ dị mkpa.
Kedu esi mee ka mpụga si na disk diski
Maka ihe dịgasị iche iche, ndị ọrụ nwere ike ịdị mkpa ịmepụta mpụga mpụga site na diski ike. Ọ dị mfe ime ya n'onwe gị - dị nnọọ na-etinye narị ole na ole rubles na ngwa ndị dị mkpa na-etinye ihe karịrị 10 nkeji ijikọ ma na njikọ. Na-akwadebe iji zukọta HDD dịka nchịkwa, ọ dị mkpa ka ịmepụta HDD na-apụta maka ihe ndị na-esonụ: A diski ike dị, mana enweghi ohere ọ bụla na ngwaọrụ ma ọ bụ ọrụ ike iji jikọọ ya; A na-ezubere HDD iji soro gị gaa / na-arụ ọrụ ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa maka njikọ mgbe niile site na motherboard; A ghaghị ijikọ ụgbọala ahụ na laptọọpụ ma ọ bụ ntụgharị; Ọchịchọ ịhọrọ ụdị mmadụ (ahụ).
Kedu ihe mere i ji chọọ onye na-eme ka ọkpụkpụ na diski ike
Otu n'ime akụkụ nke draịvụ ike ahụ bụ onye na-adịghị mma ma ọ bụ onye na-egbu egbu. Ọ bụ akụkụ dị mkpa nke HDD na-emezighị emezi na-arụ ọrụ na ọnọdụ IDE, ma ọ pụkwara ịchọta ya na draịva siri ike n'oge a. Ebumnuche nke onye na-ahụ maka diski ike Na afọ ole na ole gara aga, draịva siri ike na-akwado ụdị IDE, nke a na-ewere ugbu a dị ka oge na-adịghị.
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, data echekwara na diski ike dị mkpa karịa ngwaọrụ n'onwe ya. Ọ bụrụ na ngwaọrụ ada ada ma ọ bụ na-edozi ya site na akpaghị anya, ịnwere ike wepu ozi dị mkpa site na ya (akwụkwọ, foto, vidiyo) iji ngwanrọ pụrụ iche. Ụzọ iji weghachi data site na HDD mebiri emebi Iji weghachite data, ịnwere ike iji windo mberede ngwa ngwa windo ma ọ bụ jikọọ HDD mmejọ na kọmputa ọzọ.
Ihe mere kọmputa anaghị ahụ disk diski
Nsogbu nke kọmputa na-adịghị achọpụta bụ ihe nkịtị. Nke a nwere ike ime na nke ọhụrụ ma ọ bụ nke ejibu, na mpụga na HDD. Tupu ị gbalịa idozi nsogbu ahụ, ị ​​ga-achọpụta ihe kpatara ya. Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ onwe ha nwere ike idozi ihe isi ike ndị metụtara na diski ike - ihe niile ị ga - eme bụ ịgbaso ntuziaka ma rụọ ọrụ nke ọma.
Ezigbo usoro nke disk diski
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nwere otu nchekwa nchekwa na kọmputa ha. Mgbe ị na-ebu ụzọ wụnye sistemụ arụmọrụ, a ga-agbajikwa ya n'ime ụfọdụ akụkụ. Onye ọ bụla dị mgbagwoju anya bụ maka ịchekwa ozi a kapịrị ọnụ. Na mgbakwunye, enwere ike ịhazi ya n'ime usoro faịlụ dị iche iche na otu n'ime akụkụ abụọ.
Otu esi etinye paswọọdụ na disk diski
Diski diski na-echekwa ozi dị mkpa maka onye ọrụ. Iji chebe ngwaọrụ site na ịnweta ohere n'enweghị ikike, a na-atụ aro ka ịtọọ paswọọdụ na ya. Enwere ike ime nke a site na iji Windows ma ọ bụ ngwanrọ pụrụ iche. Otu esi etinye paswọọdụ na diski ike Ị nwere ike ịtọ paswọọdụ na diski ike dum ma ọ bụ ngalaba ya.
Ihe ị ga-eme mgbe diski diski adịghị
Ịhazi HDD bụ ụzọ dị mfe iji kpochapụ data niile echekwara ya na / ma ọ bụ gbanwee usoro faịlụ ahụ. Ọzọkwa, a na-ejikarị usoro iji "hichaa" ntinye nke sistemụ arụmọrụ, ma mgbe ụfọdụ nsogbu nwere ike ibili ebe Windows na-enweghị ike ịrụ usoro a. Ihe kpatara kpatara diski diski ahụ E nwere ọtụtụ ọnọdụ ebe ọ na-agaghị ekwe omume ịkọ usoro.
Na-agbanwe mgbidi siri ike na PC na laptọọpụ gị
Mgbe draịvụ ike ahụ adịkwaghị, malitere ịrụ ọrụ na-adịghị mma, ma ọ bụ ụda olu ugbu a ezughị, onye ọrụ kpebiri ịgbanwe ya na HDD ma ọ bụ SSD ọhụrụ. Mgbanwe nke ochie ụgbọala na ọhụrụ bụ a dị mfe usoro na ọbụna onye na-enweghị njikere ọrụ nwere ike ịrụ. Ọ dịkwa mfe ịme nke a na kọmputa kọmputa ọ bụla na na laptọọpụ.
Kedu ihe nhazi usoro disk na otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi
Site na nhazi usoro a bu usoro nke itinye akara puru iche n'ile. Enwere ike iji ya maka ma ọ bụ ihe eji eme ihe. Ọkpụkpọ HDD dị mkpa iji mepụta akara, na-enweghị nke ọ ga-agaghị aghọta site na sistemụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na enweela ozi ọ bụla na draịvụ ike ahụ, ehichapụ ya.
Ijikọ draịva ike mpụga na PS4
A na-ewere console egwuregwu PS4 ugbu a dị ka ụlọ ahịa kasị mma na nke kachasị mma n'ụwa. Ndị ọkachamara na ndị ọzọ na-ahọrọ egwuregwu ahụ na ngwaọrụ dị otú ahụ, kama na PC. Na-enye aka na ntọhapụ a na-agbanwe mgbe niile nke ngwaahịa ọhụrụ, na-enyefe ma na-eme ka ọrụ niile rụọ ọrụ. Otú ọ dị, nchekwa dị n'ime PS4 nwere njedebe ya, na mgbe ụfọdụ, a naghị etinye ebe niile zụrụ egwuregwu ọzọ.
Ndị nrụpụta ụgbọala siri ike
Ugbu a n'ahịa na-asọmpụta na onye ọ bụla ọzọ ọtụtụ ndị na-emepụta nke arụmọrụ siri ike. Onye ọ bụla n'ime ha na-anwa ịdọrọ mmasị ndị ọrụ, ihe ịtụnanya na njirimara ma ọ bụ ọdịiche dị iche na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Site na ịnweta ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ na ntanetị, onye ọrụ ahụ na-eche ọrụ siri ike nke ịhọrọ draịvụ ike.
Kedu ihe agba ụda draịvụ nke Western Digital pụtara?
Western Digital bụ ụlọ ọrụ a ma ama maka nnukwu arụ ọrụ siri ike nke arụpụtara kemgbe ọtụtụ afọ. Maka ọrụ dịgasị iche, onye na-emepụta emepụta ngwaahịa a, onye ọrụ na-enweghị uche nwere ike ịnweta nsogbu mgbe ị na-ahọrọ ụgbọala site na ụlọ ọrụ a. Isiokwu a ga - enyere gị aka ịghọta nhazi ọkwa nke "agba" diski.
Ngwa ngwanrọ hard disk
Ịgbanwe akara diski ochie ahụ na nke ọhụrụ bụ usoro dị mkpa maka onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịchekwa ozi niile na ibe. Ntinyeghari sistemụ arụmọrụ, ịnyefe mmemme arụnyere na ịjigharị faịlụ njirimara aka aka dị ogologo ma gharazie.
Otu esi agba ọsọ disk
A diski diski bụ ngwaọrụ nke dị ala, ma zuru ezu maka mkpa kwa ụbọchị, ọsọ ọrụ. Otú ọ dị, n'ihi ụfọdụ ihe, ọ nwere ike ịbụ obere ihe, nke a na-eme ka ịmepụta ihe omume dị ntakịrị, ịgụ na ịde faịlụ na n'ozuzu ọ na-esighị ike ịrụ ọrụ. Site na ịmecha ọtụtụ omume iji mee ka ọsọ nke draịvụ ike ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta mmelite dị mma na arụmọrụ na sistemụ arụmọrụ.